रेडक्रस सोसाईटीको महाधिवेशनका क्रममा दुईपक्षबीच विवाद उत्पन्न !
कार्तिक २८ २०७८
काठमाडौँः नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको विशेष विधान महाधिवेशनका क्रममा दुईपक्षबीच विवाद भएको छ । काठमाडौंको बबरमहलस्थीत कार्की ब्याङ्केटमा आयोजित विशेष महाधिवेशनमा दुईपक्षबीच विवाद भएपछि महाधिवेशन नै स्थगीत भएको छ ।
१६ जिल्लाको कार्यसमिति विघटन गरेपछि असन्तुष्ट रहेका समूहले बिरोध जनाएका थिए । विवादका क्रममा तोडफोड हुन थालेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो । सो क्रममा केहिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । रेडक्रश सोसाईटी काठमाडौं अन्तर्गत गणबहाल उपशाखाका सभापति अमृतराज मानन्धरले रेडक्रसभित्र राजनीति हावी भएका कारण नै विवाद देखिएको बताए ।
सात प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय, ७७ जिल्ला शाखा कार्यालय, स्थानीय तहमा १ हजार ५ सय ५४ उपशाखा कार्यालयहरु र ६ हजार ५ सय ३८ जुनियर तथा युवा सर्कलहरूको सांगठनिक स्वरूपबाट रेडक्रस क्रियाशील छ ।
सरकारले लगायो अफ्रिकी मुलुकका नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा रोक, यस्तो छ रहस्य !
अनशन बस्दै आएकी सामाजिक अभियन्ता बरालको वीरमा उपचार हुदैँ
रेबिज विरुद्धको सुई अब सातै प्रदेशबाट लगाइने
एनएमसिको चुनाव मंसिरमा, डा.शाह पनि सदस्यमा दाबी गर्दै !